Ku dhawaad 10 qof oo ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay Nugaal | raascasayrmedia.com
← Madaxweynaha Puntland iyo Wafdi uu Hogaaminayo oo ku sugan Dalka Telyaaniga(Sawiro)
wafdigii horumarinta Gobolka Raascasayr oo Si heer Sare ah Loogu Soo Dhaweeyay degmada Baargaal(Daawo Sawiro) →
March 3, 2011 · 1:23 am
Ku dhawaad 10 qof oo ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay Nugaal
Ku dhawaad 10 qof oo ay ku jireen haween iyo caruur ayaa ku dhintay tiro intaasi ka badana waa ay ku dhaawacmeen Shil gaari oo maanta ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Nugaal.
Sida ay sheegayaan wararka Shabelle ay ka heleyso deegaanka Dangorayo ee gobolka Nugaal, Shil gaari oo sababay dhimasho iyo dhaawac farabadan ayaa maanta ka dhacay halkaasi iyadoo qaar ka mid ah dadka shilka ku dhaawacmayna xaaladooda laga deyrinayo.
Gaariga Shilka galay oo ahaa UD ayaa waxaa la sheegay in uu ka soo ambabaxay Magaalada Boosaaso waxaana uu wadada ka baxay markii uu marayo deegaanka Dangorayo iyadoo shilka uu halkaasi ku galeyna uu sababay dhimada 7 ruux iyo dhaawac 8 kale oo uu ku jiro wiil yar oo aabihiis uu ka mid ahaa dadka dhintay.
Sedax ka mid ah dadka dhintay ayaa la sheegay in ay haween ahaayeen iyadoo 4-ta kalana ay rag ahaayeen sida uu Idaacada Shabelle u sheegay gudoomiyaha deegaanka Dangorayo Muqtaar C/raxmaan.
Dadka dhaawacmay ayaa xaaladooda laga deyrinayaa waxaana qaarkood la sheegay in loo qaaday isbitaalka Magaalada Garoowe ee caasimada Maamul goboleedka Puntland sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadkii safarka ahaa.